I-TCDD ayibuyisi umva kwiTikiti lokubhaliswa kweTY inyanga nenyanga | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraI-TCDD ayibuyeli emva kwiTikiti lokuHamba leYHT lenyanga
i-tcdd yht ubhaliso lwenyanga aluphindanga kwixabiso lentengo
Ukuphendula impendulo ye-TCDD Tasimacilik "yokuhamba kakhulu" ngokubhekisele kwitikiti zesantya esiphezulu (i-YHT), emva kwelungiselelo ngokuxhomekeke kwisiteyitimenti "sokuphungulwa", amehlo ajike aba ngamanyathelo amatsha ukuba athathwe kuthutho lukaloliwe.
U-Olcay Aydilek waseHabertürk uthathe umphumo wolawulo lwe-TCDD. Ngokuhambelana, akukho nyathelo libuyile kumaxabiso amatsha. Uluhlu lwamaxabiso amatsha lubalelwa kumawaka angama-7 amawaka abagibeli be-YHT abazizigidi ezisi-350 rhoqo ngonyaka. Injongo ye-TCDD Tasimacilik kukucutha ilahleko, eyi-1 billion ye-TL ngonyaka, ngokuthe ngcembe; Ukunyusa inani labakhweli kunye nenqanaba lenkonzo ingakumbi kudidi lweshishini olukhethwe ngabantu abashishini. Akukho mmiselo mtsha ucingelwayo kumaxabiso eethikithi zeYHT emva kohlengahlengiso "lwesaphulelo". Emva kokunyuka komgangatho weenkonzo zokutya, ukunyuka kwamaxabiso “eeklasi zeshishini” kujongwa ngokuqinisekileyo.
I-TCDD Tasimacilik ithathe amanyathelo abalulekileyo ngokubhekisele kumaxabiso etikiti le-YHT, aqala ukusebenza ngeentsuku zokuqala zale nyanga. Okokuqala, kwenziwa amalungiselelo amatikiti eklasi yeshishini. Ukususela nge-3 kaJanuwari XNUMX, izaphulelo "zeklasi yeshishini" zisuswe ngokupheleleyo.
Ke, inzuzo yexabiso lokuthenga amatikiti ajikelezayo amaninzi asetyenziswa ngabo bahamba kumgca ofanayo (umzekelo phakathi kwe-Ankara-Eskişehir okanye i-Ankara-Konya) yancitshiswa kwaye izaphulelo ezifakwe kula matikiti zancitshiswa kakhulu. Emva kolu lungiselelo, kwenziwa uluhlu lwamaxabiso amatsha.
Funda ibali elipheleleyo eliphuma kumthombo nqakraza apha
Urhulumente waseFransi akayekanga phantsi nangona isiteyhini somzila (iVidiyo)
I-Student Hike kwiThutho zoLuntu kwiBursa ibuyisiwe
Iprojekthi ye-Ankara Sivas YHT isondela kwinqanaba ngenyathelo
I-Turhan Ithetha malunga nokubhaliswa kwe-YHT kunye neentlawulo zeTurasia yeTurasia
Phindela emuva ekuqhekekeni kwendlela yokwenza umzila wesitimela ovela kwi-EU
I-TCDD i-Bandırma Port iye yazisa isimemezelo sesithenda sokwakha
Ixabiso leThikithi yexabiso